Dambudziko 2: matatya (1-15)
Dambudziko 3: unyunyu (16-19)
Dambudziko 4: mbuo (20-32)
KuGosheni hakuna kuva nematambudziko (22, 23)
8 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Pinda muna Farao uti kwaari, ‘Jehovha ari kuti: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira.+ 2 Kana ukaramba uchivarambidza kuenda, ndichatambudza nyika yako yese nematatya.+ 3 Uye Rwizi rwaNire ruchazara nematatya, uye achabuda opinda mumba mako, muimba yako yekurara, pamubhedha wako, mudzimba dzevashandi vako nevanhu vako, mumaovheni ako, nemumidziyo yako yekukanyira chingwa.+ 4 Matatya achauya pauri, pavanhu vako, nepavashandi vako vese.”’” 5 Jehovha akazoti kuna Mozisi: “Udza Aroni kuti, ‘Tambanudzira ruoko rwako rwakabata tsvimbo pamusoro penzizi, pamusoro pemigero yaNire, nepamusoro penzvimbo dzine machakwi, uite kuti matatya abude panyika yeIjipiti.’” 6 Saka Aroni akabva atambanudzira ruoko rwake pamvura yeIjipiti, matatya akatanga kubuda, akazara panyika yeIjipiti. 7 Asi vapristi vaiita zvemashiripiti vakaitawo saizvozvo nemashiripiti avo, naivowo vakaita kuti matatya abude achiuya panyika yeIjipiti.+ 8 Farao akabva ashevedza Mozisi naAroni ndokuti: “Tetererai Jehovha kuti abvise matatya kwandiri nekuvanhu vangu,+ nekuti iye zvino ndava kuda kurega vanhu vachienda kuti vanopa zvibayiro kuna Jehovha.” 9 Mozisi akabva ati kuna Farao: “Zviri kwamuri kuti munoda kuti nditeterere riini kuti matatya abviswe kwamuri, kuvashandi venyu, kuvanhu venyu, nemudzimba dzenyu. Achasara muRwizi rwaNire chete.” 10 Iye akati: “Mangwana.” Saka akati: “Zvichaitwa sezvamataura, kuti muzive kuti hakuna mumwezve akaita saJehovha Mwari wedu.+ 11 Matatya achabva kwamuri, mudzimba dzenyu, pavashandi venyu, nepavanhu venyu. Achangosara muna Nire chete.”+ 12 Saka Mozisi naAroni vakabva pamberi paFarao, uye Mozisi akateterera Jehovha nezvematatya aakanga aunza kuna Farao.+ 13 Jehovha akaita zvakanga zvakumbirwa naMozisi, matatya akatanga kufira mudzimba, muzvivanze, nemuminda. 14 Vaiaunganidza, mirwi nemirwi, uye nyika yacho yakatanga kunhuhwa. 15 Farao paakaona kuti dambudziko racho rakanga rapfuura, akaomesa mwoyo wake+ uye akaramba kuvateerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha. 16 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Udza Aroni kuti, ‘Tambanudza tsvimbo yako, urove guruva repanyika, uye richava unyunyu* munyika yese yeIjipiti.’” 17 Vakabva vaita izvi. Aroni akatambanudza ruoko rwake rwakanga rwakabata tsvimbo yake, akarova guruva repanyika, unyunyu hukauya pavanhu nepamhuka. Guruva rese repanyika rakava unyunyu munyika yese yeIjipiti.+ 18 Vapristi vaiita zvemashiripiti vakaedzawo kushandisa mashiripiti avo kuti vaunze unyunyu,+ asi vaisakwanisa. Uye unyunyu hwakauya pavanhu nepamhuka. 19 Saka vapristi vaiita zvemashiripiti vakati kuna Farao: “Uyu munwe waMwari!”+ Asi Farao akaramba akaomesa mwoyo, uye haana kuteerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha. 20 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Fumomuka unomira pamberi paFarao. Iye achange achienda kurwizi. Unofanira kuti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira. 21 Asi kana ukasarega vanhu vangu vachienda, ndichakutumira mbuo,* iwe, vashandi vako, nevanhu vako nemudzimba dzako; uye dzimba dzeIjipiti dzichazara nembuo, uye dzichazara kunyange pasi pavanenge vakatsika.* 22 Zuva iroro ndichaita kuti kuGosheni, kunogara vanhu vangu, kusiyane nedzimwe nzvimbo. Kuchange kusina mbuo,+ uye izvi zvichaita kuti uzive kuti ini, Jehovha, ndiri munyika ino.+ 23 Uye ndichaita kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vangu nevanhu vako. Chiratidzo ichi chichaitika mangwana.”’” 24 Jehovha akaita saizvozvo, uye mbuo dzakawandisa dzakatanga kudirana dzichipinda mumba maFarao nemudzimba dzevashandi vake nemunyika yese yeIjipiti.+ Nyika yacho yakasakadzwa nembuo.+ 25 Farao akazoshevedza Mozisi naAroni akati: “Endai munopa Mwari wenyu zvibayiro muri munyika muno.” 26 Asi Mozisi akati: “Hazvina kunaka kuti tidaro, nekuti zvatinenge tichibayira kuna Jehovha Mwari wedu zvinosemesa vaIjipiti.+ Kana vaIjipiti vakationa tichipa chibayiro chinovasemesa, vangasatitema nematombo here? 27 Tichafamba rwendo rwemazuva matatu tichienda kurenje, tozopa zvibayiro kuna Jehovha Mwari wedu tava ikoko sezvaakatiudza.”+ 28 Farao akati: “Ndichakuregai muchienda kuti munopa Jehovha Mwari wenyu zvibayiro kurenje. Asi musanyanya kuenda kure. Chindinyengetereraiwo.”+ 29 Mozisi akabva ati: “Iye zvino ndava kubva kwamuri, ndichanoteterera Jehovha kuti mbuo dzibve kuna Farao, kuvashandi vake, nekuvanhu vake mangwana. Asi Farao ngaarege kuramba achitinyengedza* achiramba kuti vanhu vaende kunopa Jehovha zvibayiro.”+ 30 Mozisi akabva abva pamberi paFarao akateterera Jehovha.+ 31 Saka Jehovha akaita zvakataurwa naMozisi, mbuo dzikabva kuna Farao, kuvashandi vake, nekuvanhu vake. Hapana kana imwe chete yakasara. 32 Asi Farao akaomesa mwoyo wake zvakare uye haana kurega vanhu vachienda.
^ Aka kachipukanana kakaita senhunzi kanoruma.
^ Kureva, vaIjipiti.
^ Kana kuti “achiita zvekutamba nesu.”